တစ်ဦးမဲ့ကိုးစားလော့မှလီချင်စတိန်းဖောင်ဒေးရှင်းမှဖွဲ့စည်းခြင်း & နှိုင်းယှဉ်
တစ်ဦးကလီချင်စတိန်း Foundation မှအထူးရညျရှယျပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာတခုနှင့်တခုအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပညတ်တရားအောက်၌ပြုလုပ်ရှယ်ယာရှင်များ, သင်တန်းသားများသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်မရှိဘဲသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများအတွက်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုပြင်ဆင်ရန်ထိန်းချုပ်မှုထိန်းသိမ်းနေစဉ်တည်ထောင်သူပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
တိုက်မြစ်အဘို့ခွင့်ပြုရည်ရွယ်ချက် Non-စီးပွားရေးနှင့် / သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုလိုက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးက Non-Commercial ဖောင်ဒေးရှင်းမှအဘို့, ဒီအဘယ်သူမျှမတက်ကြွသောကုန်သွယ်သို့မဟုတ်အခြားစီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါဝငျဆိုလိုသည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လှုပ်ရှားမှုများသာယင်း၏ Non-စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, non-စီးပွားဖြစ်အခြေခံအုတ်မြစ်စီးပွားဖြစ်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်လိုက်ရန်မသင့်ပါ။
အားလုံးအမြစ်လည်းများအတွက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဥပဒအဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်း 2008 ၏အက်ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။
Trust မှ vs. လီချင်စတိန်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ဒီတော့ဘယ်လိုအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုယုံကြည်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ပါဘူး။ ရိုးအမြစ်ကိုဥရောပကုန်းမကြီးပေါ်တွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာအရပ်ဘက်ပညတ်တရား၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ Trusts မှအင်္ဂလန်မှာဘုံပညတ်တရား၏လက်မှအစပြုတာဖြစ်တယ်။ ဘုံဥပဒအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, သြစတြေးလျ, ကနေဒါနှင့်တခြားအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံများသို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။
တစ်ဦးယုံကြည်မှုနှင့်မတူဘဲတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းသက်ဆိုင်တဲ့ပါတီများအနေဖြင့်သီးခြား entity ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလငျး၌, သူတို့ကပိုကုမ္ပဏီများသည်နှင့်တူယုံကြည်မှုထက်ဖြစ်ကြသည်။ ကုမ္ပဏီများနှင့်ကိုး စား. မတူဘဲမရှိပိုင်ရှင်များသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့် (ကသူတို့ကိုရှိစေခြင်းငှါသော်လည်း) ရှိမရှိလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်၎င်း၏အမည်ကိုအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရရှိထားသည်။
တစ်ဦးယုံကြည်မှုနှင့်တကွ, ဂေါပကအဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်များအကျိုးအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးကယုံကြည်မှုမယ့်သီးခြားခွဲထွက်ပေမယ့်ယုံကြည်မှုအတွက်ပါတီများအကြားစာချုပ်ဆက်ဆံရေးမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကခိုလှုံဂေါပကရဲ့နာမကိုအမှီပိုင်ဆိုင်မှုရရှိထားသူ; မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသော်လည်းသူ၏ထဲတွင်သူမ၏သို့မဟုတ်ယင်း၏အရာရှိတဦးကဂေါပကစွမ်းရည်။
လီချင်စတိန်း Foundation မှအကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကလီချင်စတိန်း Foundation မှအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်:
ပိုင်ဆိုင်နိုင်ငံခြားရေး 100%: အဆိုပါတည်ထောင်သူတစ်အမျိုးသားရေးဖြစ်နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
အခွန်အခမဲ့မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်း: ပုဂ္ဂလိကအကျိုးခံစားခွင့်မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းမျှအခွန်ပေးဆောင်။ သို့သော်အမေရိကန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအခွန်အခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်သူတို့အခွန်အေဂျင်စီများအားလုံးဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
သီးသန့်လုံခြုံရေး: သာစီးပွားဖြစ်တက်ကြွစွာအမြစ်လည်းအစိုးရနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားရမယ်။ အကျိုးခံစားရဲ့အမည်များကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဘယ်တော့မှဖြစ်ကြသည်။
လွယ်ကူပြီးမြန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း: ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံဟာ Registry နှင့်အတူတင်သွင်းနေသည်နှင့်ခွင့်ပြုချက်နှစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းအထိကြာပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်း: မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းစုံလင်သောအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း tools များဖြစ်ကြသည်။
လီချင်စတိန်းဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုခုဘာသာစကားမှာနာမည်တစ်ခုရွေးနိုင်သည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာသောနေရာများပါဝင်သည်ဆိုပါကအထူးခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သူရဲ့ notarized လက်မှတ်နှင့်အတူရေးသားထားသော Foundation မှကြေညာစာတမ်းကငျြ့မှတဆင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ စီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် Non-Commercial ဖောင်ဒေးရှင်းအစိုးရ၏ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry ကိုအတူမှတ်ပုံတင်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါတည်ထောင်သူတစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါတည်ထောင်သူဖြစ်စေတစ်အောသို့မဟုတ်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းအဖြစ်ရေးသားခြင်းအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်များအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ထွက်သတ်မှတ်။ အကျိုးခံစားရသူများ၏အုပ်စုတစုကဒီအောသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသောရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါတည်ထောင်သူဆိုအခြေခံအုတ်မြစ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်ပင်မှတ်ပုံတင်ရေးရုပ်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အဆိုပါတည်ထောင်သူရဲ့အခွင့်အရေးကိုလွှဲပြောင်းမဟုတ်သလို bequeathed မရနိုင်ပါ။
ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်စီအခြေခံအုတ်မြစ်များ၏အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအခွင့်အာဏာသည်။ ဒါဟာစီမံခန့်ခွဲမှုသည်ဥပဒေရေးရာနှင့်စပ်လျဉ်းအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ပညတ္တိကျမ်းအနည်းဆုံးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတစ်ဦးပြည်တွင်းဥပဒေရုံးလိပ်စာနှင့်အတူရှေ့နေဖြစ်ရမည်လိုအပ်သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားများဖြစ်ခြင်းနှင့်အခြားမည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
အစည်းအရုံးနှင့်၎င်း၏ဖြင့်ယောက္ခမ၏တည်ထောင်သူရဲ့ဆောင်းပါးဟာအကျိုးခံစားရသူများ၏အခွင့်အရေးများထွက်ထားကြ၏။ အဆိုပါတည်ထောင်သူတစ်ဦးအကျိုးခံစားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအကျိုးခံစားရသူများများ၏အခွင့်အရေးအချို့အချိန်ကန့်သတ်, အခြေအနေများနှင့်လိုအပ်ချက်မှချည်ထားသောနိုင်ပါသည်။ မူရင်းဆောင်းပါးခွင့်ပြုပါလျှင်ထိုကဲ့သို့သောအကျိုးစီးပွားသည့်အချိန်တွင်မဆိုအစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများပြင်ဆင်ရေးအားဖြင့်ရုတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်စီအစည်းအရုံးနှင့်တည်ထောင်သူများပညာရှိတို့၏ဆောင်းပါးများအားဖြင့်လိုက်နာရပေမည်။
တောင်းဆိုမှုများပတ်သတ်ပြီးများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံကိုအောက်ပါအတိုင်းအခြေခံအုတ်မြစ်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်ထွက် set အကျိုးရှိသောအကျိုးစီးပွားနှငျ့ပတျသကျတည်ရှိ:
အလားအလာ Entitlements: ဒီသတ်မှတ်ရေးအခြားသူများအားတဦးတည်းအကျိုးခံစားခွင့်အနေဖြင့်အကျိုးရှိသောအကျိုးစီးပွား၏ဆက်ခံဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီအကြိုးကြေးဇူးမြားရယူနေအကျိုးခံစားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆက်ခံ၏အခွင့်အရေးများခံစားခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ယင်းကိစ္စအငြင်းပွားပတ်သက်နေကာကွယ်ပေးသည်။
လိုသလိုအကျိုးခံစားရသူများ: အဆိုပါတည်ထောင်သူသူ၏အခွင့်အရေးများဖောင်ဒေးရှင်းကောင်စီများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်များမှာလိုသလိုအကျိုးခံစားရသူများနေသော designates ။
အဆုံးစွန်အကျိုးခံစားရသူများ: အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ဖျက်သိမ်းမှုပြီးနောက်သတ်မှတ်ထားသော Ultimate အကျိုးခံစားရသူများပြီးသားနဲ့အခြားအကျိုးခံစားရသူများလွှဲပြောင်းမကျန်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလက်ခံရရှိသည်။
အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်ဖျက်သိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြီးစီးပေါ်၌အစိုးရ၏အခြေခံအုတ်မြစ်၏ deregistration ရက်အနည်းငယ်အတွင်းသက်ရောက်မှုယူနိုင်ပါတယ်။
ရိုးအမြစ်သည်လက်ရှိတွင် 12.5 CHF ၏နိမ့်ဆုံးအခွန်နှင့်အတူပိုက်ကွန်ဝင်ငွေ 1,200% ဖြစ်သောဝင်ငွေအခွန်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကစည်းစိမ်ဥစ္စာဖွဲ့စည်းပုံ (PVS) သာနိမ့်ဆုံး 1,200 CHF နှစ်စဉ်အခွန်ပေးဆောင်အဖြစ်သို့သော်အခြေခံအုတ်မြစ်များအခြေအနေကိုအခွင့်ကိုခံတော်မူပြီးမှ။ PVS status ကိုယေဘုယျအားဖြင့် Non-စီးပွားဖြစ်တက်ကြွရိုးအမြစ်ကိုမှခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂလိကအကျိုးခံစားခွင့် (မိသားစု) ဖောင်ဒေးရှင်း
တစ်ဦး "စင်ကြယ်သော" မိသားစုအခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်, ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီးနိုင်ငံတကာအခြေခံပေါ်မှာတစ်မိသားစုရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လုံခွုံရေးအတှကျထားရှိမည်။
တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကအကျိုးခံစားခွင့်မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက "အိမ်ရာစီမံကိန်း" ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ကို set up နိုင်ပါတယ်။ အကျိုးခံစားရသူများပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းလာမည့်မျိုးဆက်နှင့်ကျော်လွန်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အဆိုပါတည်ထောင်သူအများအပြားစဉ်မြေးဆက်ကျော်တိကျတဲ့အခြေအနေများသူသို့မဟုတ်သူမ၏သားစဉ်မြေးဆက်ခညျြနှောငျဖို့လွတ်လပ်မှုကိုရှိပါတယ်။ ဤသည်အကုန်အကျနှင့်အချိန်စားသုံးအမွေဥစ္စာကိုအစမ်းနှင့်အခွန်ကနေသူသို့မဟုတ်သူမ၏ချက်ချင်းမိသားစုကိုကာကွယ်ရန်လိုတစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်စုံလင်သောမော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ချက်ချင်းမိသားစုအဖွဲ့ဝင်များတည်ထောင်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ရှားမှုများစီမံခန့်ခွဲခြင်း၏ဖိစီးမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိကအကျိုးခံစားခွင့်မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းအပေါ်ချမှတ်ထားခြင်းမရှိအခွန်ရှိပါသည်။ အမြတ်အစွန်းအတွက်အကျိုးခံစားရသူများစေအခွန်မျှမဖြန့်ဝေဖို့မဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်, ဒါမှမဟုတ်ဆုကြေးဇူးကိုအခှနျ, ဒါမှမဟုတ်အမွေဥစ္စာကိုအခှနျလီချင်စတိန်းအတွက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သူတစ်ဦးတည်းသောအကျိုးခံစားကဲ့သို့မိမိကိုမိမိသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုအကျိုးခံစားရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အမည်ရှိမိသားစုဝင်အကျိုးခံစားရသူများတူညီတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစား။ ဒါကအခြေခံအုတ်မြစ်သို့ပိုင်ဆိုင်မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲထုတ်ပါဝင်သည်။ အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများရေးဆွဲသည့်အခါတစ်ဦးတည်ထောင်သူအများအပြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry ကိုအတူမှတ်ပုံတင်ရန်ရှိသည်နှင့်အဘယ်သူမျှမပြင်ပကြီးကြပ်မှုမရှိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်အစိုးရနဲ့တင်သွင်းခံရဖို့မလိုအပ်အဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကငျြ့ပုဂ္ဂလိကဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါ။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry ကိုနဲ့လုပ်ရပ်တွေအတွက်များ၏ Registry ကိုနှင့်အတူတင်သွင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၏ရိုးရှင်းသတိပေးချက်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံရှေ့နေနှင့်ဂေါပကကိုသာတည်ထောင်သူရဲ့အမည်နှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအကျိုးခံစားရသူများများ၏အမည်များကိုအစိုးရကမှထုတ်ဖော်ဘယ်တော့မှနေကြသည်။
တစ်ဦးကလီချင်စတိန်း Foundation မှအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်: 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, တည်ထောင်သူတည်ထောင်သူတစ်ခုတည်းသောအကျိုးခံစား, မိသားစုရိုးအမြစ်ကိုအဘယ်သူမျှမအခွန်အခများပေးဆောင်, privacy ကို, လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်စွာမှတ်ပုံတင်ရေး, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဖြစ်နိုငျသညျ, စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုထိန်းသိမ်းထားသည်။